पत्नीले काटिन् लोग्नेको यौनांग ! - www.kchhakhabar.com
पत्नीले काटिन् लोग्नेको यौनांग !
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०९, २०७४ समय: ९:५१:४२
आफ्नो श्रीमानले अरु कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध गाँसेको कुनचाहिँ महिलालाई सैह्य होला ? एकजना महिलाले यस्तै रिसको झोंकमा आफ्नो लोग्नेको यौनांग छिनालेर ट्वाइलेटमा बगाइदिएकी छन् । छिमेकी देश भारतको जालन्धरस्थित जोगिन्दर सहरमा बस्ने आजाद सिंह नामक पुरुष यस्ता अभागी सावित भए, जसको लिंग उनकै पत्नीले छिनाइन् ।
उनी अहिले ठुटो यौनांग सहित गम्भीर अवस्थामा स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन् । लोग्नेको लिंग छिनाल्ने उनकी पत्नीको नाम सुखवन्त कौर हो । पति आजाद सिंहले अरु नै महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको शंका उनलाई लाग्यो । त्यसपछि उनी रिसले चूर भइन् र यस्तो अनर्थ कदम उठाइन् ।
लोग्ने सुतेको बेला उनले फलामको रडले हिर्काएर बेहोस् बनाइन् अनि चक्कुले लिंग छिनालिदिइन् । छिनालेको लिंगको टुक्रा उनले ट्वाइलेटमा लगेर बगाइदिइन् । आफ्नै पत्नीले लिंग काटिदिएर गम्भीर अवस्थामा पुगेका सिंहलाई उद्धार गरी अस्पताल पुराइयो । तर अत्यधिक रगत बगेका कारण उनको अवस्था निकै गम्भीर रहेको बताइएको छ । सिंहका पिताको उजुरीका आधारमा उनकी पत्नीमाथि मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
नेपाली दूतावासले पठायो मृतक परिवारलाई ‘ब्लडमनी’
साउदी अरबम सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका १८ मृतक नेपालीका परिवारका लागि त्यहास्थित नेपाली दुतावासले ब्लड मनी पठाएको छ । आ...
काठमाडौं / सरकारले सहरी गरिब, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्र...
जोशी आजदेखि बिदामा, पेसी तोक्ने जिम्मा मिश्रलाई
काठमाडौं / सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी आज आइतबारदेखि बिदामा वस्नुहुने भएको छ । संसदीय सुनुव...
दुवै जनालाई झापाको काकँडभिट्टा नाकासँग जोडिएको पानीट्ङयाकी क्षेत्रबाट विशेष सूचनाको आधारमा भारतीय एसएसबीका ४१ बी बटालियी...
अब धूवाँ फ्याँक्ने गाडीमाथि प्रतिबन्ध
काठमाडौं / सरकारले आगामी भदौ १ गतेदेखि धूवाँ फ्याँक्ने सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ । सवारी साधनबाट निस्कने धू...
ईटहरीमा भत्काएकोे ग्रामथान पुनः निर्माण गर्न छलफल.
ईटहरी नगरपालिकाले सहमति नदिए संघर्ष गर्ने…संघर्षको क्रम्मा हिंसात्मक बिद्रोह भए राज्यले जिम्मेवारि लिनु पर्ने थारु...